स्वस्थानी कथाका नमिल्दा कुराहरु !
अनिल शर्मा सुवेदी, (पोखरा-७, मासबार)
अहिले स्वस्थानीको माहोल छ । कसैले श्री स्वस्थानीको व्रत लिने गर्छन् भने व्रत नलिएकाले पनि घरघरमा सपरिवार श्रद्धा अनि भक्तिकासाथ स्वस्थानीको कथा वाचन गर्ने परम्परा छ । कथाभित्र विविध प्रसंगहरु जोडेर मानिसलाई अनुशासित बन्न प्रेरित गर्दै केही आदर्श र नैतिकताको पाठ पनि सिकाएको छ । वृन्दाको चरित्र प्रस्तुत गरी पतिभक्ति देखाउन खोजिएको छ भने नवराज राजाको चरित्रबाट पितृभक्ति देखाउन खोजिएको छ । हो स्वस्थानीमा यस्ता विवध प्रसंगहरु जोडेर मानिसलाई सकारात्मककतातर्फ मोड्न प्रेरित गरेतापनि केही यस्ता प्रसंगहरु छन् जुन अमिल्दा अवैज्ञानिक र हाँसो उठ्ने खालका छन् । त्यस्ता केही प्रसंगहरु यहाँ जोड्न चाहन्छु ।
मधुकैटभको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी, मासुले पर्वत अनि हाडले ढुंगा बनेको कुरा कथामा भनिएको छ । तर हामीले सानैबाट विज्ञानको किताबमा सूर्यबाट चोईटिएर एक टुक्रा कालान्तरमा सेलाएपछि नै पृथ्वी बनेको कुरा पढ्दै आएका छौं । विज्ञानलाई चुनौती दिने यो कुरालाई हामीले कसरी लिने ? स्वस्थानीको प्रसंगलाई विश्वास गर्ने या विज्ञानलाई ?
सामान्यतया: एउटी आमाले दुई-तीन वटा सन्तान जन्माउँछिन् । पहिले पहिलेकाले आठ-दश वटासम्म सन्तान जन्माएका हामीले सुन्दै आएका छौं । तर स्वस्थानीको कथा अनुसार दक्षप्रजापतिकी पत्नी विरणीले तेत्तीस करोड छोरीहरु जन्माएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । के नारीले त्यत्रा सन्तान जन्माउन सक्छे त ? अनि त्यत्रा सन्तान जन्माउन कति वर्ष लाग्यो होला सुन्दैखेरि हाँसो उठ्दो विषय छ यो । त्यस्तै पार्वतीले नुहाउने क्रममा बुकुवा घस्दा निस्केको मयलबाट गणेश जन्मिएको कुरा, अनि गोबरलाई तसलामा राखेर तसलाले छोपी राखेको चार दिनपछि गोमा जन्मिएको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ । के मयलबाट अनि गोबरबाट मानवको जन्म संभव छ त ? कुनैपनि मानव या अन्य जीवजन्तु जन्मिनको लागि पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्बको समायोजन हुनु जरुरी छ । अहिले पछिल्लो समयमा विज्ञानको उपजस्वरुप आएको टेष्टट्युव बेबी जन्मिनको लागि पनि पुरुषको शुक्रकीट अनिवार्य पर्छ । यसरी सास्वत सत्यलाई एकापट्टि पन्छ्याएर मयल र गोबरबाट मानव जन्मिएको मनगढन्ते कुरा प्रस्तुत गरी केबल काल्पनिकता मात्र देखाईएको छ । त्यसैगरि अग्निले ओकेलेको शिवजीको विर्यबाट बलेको आगो ताप्दा ऋषिपत्नीहरुको गर्भ रहेको कुरा सुन्दा पनि हाँसो उठ्छ ।
भित्र छिर्न नदिएपछि शिवजीले आफ्नै पुत्र गणेशको टाउको छिनाएर भित्र छिर्छन् । पछि पार्वतीले बिलौना गरेपछि हात्तीको टाउको जोडेर जीवित तुल्याउँछन् । त्यसैगरी महाकाली र विरभद्रले दक्षप्रजापतिको टाउको काटी यज्ञमा होम गर्छन् । पछि विरणीको आग्रहमा बोकाको शीर जोडी दक्षलाई बिउँताइदिन्छन् । यो एकदम असंभव कुरा हो । पहिलो कुरा टाउको र जीउ छुट्टिएपछि कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भइहाल्छ । दोश्रो कुरा व्यक्तिको शरीरमा त्यसरी हात्ती र बोकाको टाउको ठीकसँग फिट हुन सक्दैन । ल एकछिनलाई मानौं देवादिदेव महादेव हुनाले त्यो संभव भयो अरे । त्यसरी हात्तीको टाउको जोडेर व्यूँताउनसक्ने महादेवले आफ्नी प्राणप्यारी सतीदेवीलाई बचाउन किन सकेनन् त ? टाउको काटिएका गणेशलाई बचाउन सक्नेले अझ महादेवको डरले अग्निले पनि डढाउन नसकेकी सतीदेवीलाई किन बचाउन सकेनन् त प्रश्न आँफैमा अनुत्तरित छ ।
विष-भाँग र धतुरोले लठ्ठ भएर बसेका भगवान शिव रावणको स्तुतिले प्रसन्न भएर आफ्नी प्राणप्यारी पत्नी पार्वती रावणलाई दिएर पठाउँछन् । पछि विष्णुको चलाखीले गर्दा पार्वती रावणको हातमा पर्नबाट बच्छिन् । के आफ्नी धर्मपत्नी पनि कुनै बस्तु हो र जस्लाई मन लाग्यो उसैलाई त्यति सजिलैसँग दिन ? महादेव कहाँसम्मका हुसु रहेछन् यदि पार्वतीलाई रावणले आफ्नो घरमा लगेर रात बिताएको भए महादेवले ती पार्वतीलाई फेरि स्वीकार गर्थे होलान् त या के गर्थे होलान् हामी आफैंले आ-आफ्नो अनुमान लगाउँ ।
एकपटक पार्वती किराँतिनीको रुप लिएर जंगल विहार गर्दा महादेव पनि किराँतको रुप लिएर जंगलमा पुग्छन् । किराँतिनीले आफूले महादेवसँग मात्र विवाह गर्ने कुरा बताएपछि महादेवले हत्त न पत्त म नै महादेव हुँ ल मसँग विवाह गर म पनि तिमीसँग विवाह गर्न ईच्छुक छु भनेका छन् । के ईश्वरले मानवलाई सिकाएको नैतिकताको पाठ यही हो त ?
छल-कपट आदि सबै देवताहरुबाटै भएको देखिन्छ । अनेकौं छल गरेर विष्णुले सतीदेवीको विवाह महादेवसँग गराइदिन्छन् । अर्कातिर शिव भट्ट दम्पतीले दान गरेको देखेर देवराज ईन्द्रलाई इर्ष्या लागी शिव भट्ट नै स्वर्गका राजा बन्न आउँछन् कि भन्ने भयले गर्दा महादेवसामु कायरताको प्रदर्शन गर्छन् । अनि शिवजीले पनि बडो बहादुरीसाथ आफू सत्तरी वर्षको वृद्ध बनी बिचरी सात वर्षकी गोमासँग विवाह गरी गर्भवती तुल्याई अनेक दुःख र कष्टको भुमरीमा फसाउँछन् । के शिवभट्टले अरुलाई दान गर्नु अरुको उपकार गर्नु उनको पाप थियो त ? होईन भने किन उनको परिवारमाथि यत्रो ठूलो बज्रपात पारे त ? आफू अगाडि बढ्नको लागि अरुको खुट्टा तान्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस कथाले िदंदैन त ? स्वस्थानीको काम मान्छेलाई राम्रो बन्न सिकाउने हो कि अरुको खुट्टा तान्न सिकाउने हो ? भगवानले त यस्तो छल कपट गर्दारहेछन् भने हाम्ले गर्न के भयो र भनी मान्छेले त्यही सिको गर्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ र ?
वृषवगिरिमा पुग्दा सतीदेवीको आसन पतन भयो अनि त्यस भूमिमा कलीले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर 'मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट पार्न समर्थ भए' भनी बरदान दिईन् भनी स्वस्थानीमा उल्लेख गरिएको छ । अचम्म लाग्छ- अरुको बुद्धि भ्रष्ट पार्न सके भनेर भनेको कुरा वरदान भयो या श्राप ? के कलीले मैले 'समस्त मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट पार्न सकुँ' भनेर वर मागेका थिए त ?
यी यावत् अमिल्दा कुराहरु स्वस्थानी कथामा आउँदा कथा सुन्ने स्रोताहरुको मनमा राम्रो नराम्रो कस्तो असर पर्ला ? हुन त विद्धानहरुले यो भनेको त मान्छेलाई बुझाउनको लागि बनाईएको सामान्य कथा मात्र हो यसको दार्शनिक पक्ष त अर्कै छ भनी तर्क गर्लान् तर त्यस्ता दार्शनिक कुरा बुझ्ने स्रोताहरु कति नै पो होलान् र ! अनि खै त्यो दार्शनिक अर्थ केमा छ त यी कथाहरुलाई हामीले कुन रुपमा लिने यी यावत् अमिलदा प्रसंगहरु आउँदा आम भक्तजनहरुको धार्मिक आस्था घट्दै जाने हो कि एकपटक राम्रोसँग विचार गरौं !